ONGORORA ZVIMWE ZVIPO?
> Maitiro esangano rekuunganidza chikwereti
• Gweta chete rekuunganidza chikwereti rinobvumidzwa kuita matanho epamutemo ezvikumbiro zviri pamusoro pe- $ 25.000,00.
• Yakatenderwa kutora imba uye mari yechikwereti
• Gweta chete rekuunganidza chikwereti rinobvumidzwa kufaisa chikumbiro chekubhuroka.
• Gweta rekuunganidza chikwereti chete ndiro rinotenderwa kubata nyaya dzekuunganidza zvikwereti pasirese.
• Inokodzera kugadzirisa makakatanwa ari pamutemo. Gweta rekuunganidza-chikwereti rakakodzera kupa zvigadziriso zvakagadziriswa uye kuongorora nekutsiva dziviriro.
Zvinowanzoitika kuti panguva yekuunganidza chiitiko, zvichiri madikanwa kuchinja kubva kumubatanidzwa wekuunganidza kana bailiff kuenda kugweta rekuunganidza. Mumamiriro ezvinhu akadai zviri nyore uye kurongeka kuve mune imwecheteyo imwechete fakitori ipapo, kwaunozivikanwa kare uye faira rakatokuvakira iwe.
Maitiro esangano rekuunganidza chikwereti
Kune yega yega nzira yekuunganidza, nhanho dzinoverengeka dzinofanirwa kutorwa. Nhanho yekutanga ndeyekuzivisa iye anenge aine chikwereti kuti haasi kuzadzisa muripo wake wekubhadhara. Izvi zvinodaro nekuti iwe unofanirwa kumupa mukana wekubhadhara mukati menguva yakajeka pasina mamwe madhiri. Iwe unofanirwa kutumira uyo ane chikwereti chiyeuchidzo chakanyorwa kune izvi. Chiyeuchidzo ichi chinodaidzwa kuti chiziviso chekudairwa. Nguva yemazuva gumi nemana inowanzoonekwa senge nguva yakakodzera umo mukweretesi akakumbirwa kubhadhara chaanoda. Eheka, Law & More'' Magweta anogona kutora ziviso yekutadza kwako.
Kana pasina ziviso yekutadza yatumirwa, mutongi anoramba chero chekukumbira kukuvadza. Nekudaro, pane mamiriro ezvinhu umo izvo zvisina kukodzera kutumira ziviso yekukanganisa, semuenzaniso kutevedza chibvumirano hazvigoneke zvachose. Nekudaro, zvinokurudzirwa kugara uchitumira chiziviso chekushomeka sekuchenjerera. Kana chikumbiro chekubhadhara chikasaenderedzwa, tinogona kutanga maitiro ekuunganidza.
Nhanho ina dzeunganidziro kurudyi
udza mashoko Law & More
Tinokumbira uyo ane chikwereti kuti abhadhare kuburikidza nechiziviso chekukanganisa
Isu tinoronga nhaurirano kuitira kuti iye anenge ane chikwereti abhadhare kana kuita chirongwa chekubhadhara
Isu tinotanga danho repamutemo uye tinotora pfuma kana zvichidikanwa
Matanho ezviitiko zvekuunganidza
Pane matanho maviri anogona kuitika munzira yekuunganidza: nhanho yekuremekedza, inozivikanwawo seyeroji yekutonga, uye nhanho yekutonga ..
Kana hukama pakati pemapato hwakanaka, zvinokurudzirwa kuti utange kupfuura nechikamu che Amicable. Muchikamu chino, tinoedza kukurudzira uyo ane chikwereti kubhadhara kuburikidza nezvakanyorwa zviyeuchidzo uye kufonera. Izvo zvinokwanisika kuti idzi nhaurirano uye kutaurirana kunotungamira kurongwa kwekubhadhara. Isu tinokurudzira kuti chirongwa chekubhadhara chiiswe pasi. Magweta edu ekuunganidza zvikwereti anogona kutora izvi. Mukana wechikamu chemubhadharo ndechekuti hukama pakati pemapato haawanzo kukanganisika uye kuti hapana mari inobhadharwa pakutongwa kwemutemo.
Kana danho rerunyararo risingakwanise kupedzwa nekubhadhara nemukweretesi kana nehurongwa hwekubhadhara, matanho emutemo anogona kutangwa. Izvo zvakare zvinokwanisika kusvetuka nhanho inonakidza uye kutanga matanho epamutemo nekukasira. Muchikamu chepamutemo, tinoti kubhadharwa kwemari yakasara uye mari yekuunganidza pamberi pedare. Maitiro epamutemo asati atangwa, zvinogona kuitisa kutora imba yemunhu ane chikwereti. Izvi zvinonzi kubata kwekuchengetedza. Kufungira zvisungo kunoitirwa kuona kuti munhu ane chikwereti haakwanise kufambisa midziyo dare risati ratonga, kuti iwe ugone kudzosera mari yako kubva kune ane chikwereti. Kana mutongi akagadza chikumbiro chako, chinongedzo chekuchengetedza chinoshandurwa kuita chinosungirirwa. Izvi zvinoreva kuti midziyo yakasungirirwa inogona kutengeswa nemubhadhari paruzhinji kana munhu ane chikwereti achiri kubhadhara. Mari inowanikwa neiyi midziyo ichashandiswa kubhadhara chikumbiro chako. Law & More'Magweta ekuunganidza zvikwereti ane ruzivo mundima yemutemo wekubatanidza uye vanofara kukubatsira panguva yekutongwa kwemutemo.
Law & More inopawo rutsigiro rwekudzivirira njodzi dzinoenderana nekubhadhara uye kubhadhara kunonoka. Semuenzaniso, isu tinopa zano vatengi kuti vabatanidze mune yavo yega mamiriro uye mamiriro ekubhadhara mazwi anogona kudzivirira ambiguities kana pakaitika kubhadhara kunonoka. Ungade rumwe ruzivo nezveizvi? Ndokumbirawo mubvunze magweta ekuunganidza chikwereti e Law & More.